Plastic Garden (I Hate Plastic Bags)
Monday,4January 2010 - Posted by Shwe Thiri Khit
ကျွန်မ အခုချိန်ထိ မြန်မာပြည်ထဲမှာ လျှောက်သွားရင်းရှိနေတုန်းပဲ။ ဒီနေ့ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ကို သွားပြီးအလည်ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာဟာ အခုဆိုလူတွေ အိုးအိမ်တွေစည်ကားလို့။ ဒါပေမယ့် အပြန်လမ်းကမ်းနားဘက်မှာ အို.. တကယ့်ရှည်လျားကျယ်ဝန်းလှတဲ့အမှိုက်ပုံကြီးက ပင်လယ်ပြင်လို ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေမှမနည်းဘဲ.. အဲဒီပေါ်မှာမှ လူနေအိမ်တချို့နေနေကြတယ်။ ပလတ်စတစ်အမှိုက်ပုံကြီးပေါ်က ဖြတ်သန်းလာတဲ့လေထုဟာ မျက်နှာပေါ်ရိုက်ခတ်လာနေတယ်။ အဟွတ် ဟွတ် ဟွတ်! ပြည်တွင်းခရီးရှည်ထွက်တဲ့အခါဆို ပိုလို့တောင်သိသာနေပါတယ်။ ရထားဖြင့် ခရီးသွားတဲ့အခါ မြို့တွေရွာတွေရဲ့ အစနားရောက်ရင် ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေများတန်းဆီကာ.. ရထားလမ်းဘေးတောက်လျှောက် မြို့တံတိုင်းတွေလိုဘဲ ကာရံလို့.. အဲ..မြို့(သို့) ရွာကထွက်သွားရင်တော့ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တံတိုင်းကြီးလည်းဂိတ်ဆုံးသွားရော့တယ်။
ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေဟာ ကြေမွပျက်ဆီးမလွယ်လို့ သိပ်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ I Hate Plastic Bags. မီးရှို့ပစ်လို့ကလည်း လေ pollution ၊ ရေမျောရင် ရေ pollution ၊ မြေမြှုပ်ရင်လည်း မြေ pollution ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒီ pollution တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ? ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေကို ဒုံးပျံထဲထည့်ပြီး အာကာသထဲပဲလွှတ်လိုက်ရမလား? အာကာသထဲရောက် အောက်ဆီဂျင်မပြတ်ခင် ကုန်လုခင်ခင်မှာ ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ရမလား? အာ.. ဒါဆို အစအနတွေ ကမ္ဘာပေါ်ပြန်မကျလောက်ဘူးထင်တယ်။ အို.. ဂြိုလ်သားတွေ ဆိုတာများရှိခဲ့ရင် အာကာသ pollution ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးကြဦးမလား?
(((Too Expensive anyway!))) အဲလို အူကြောင်ကြောင် အတွေးတွေနဲ့ သန့်ရှင်းမယ့် နယ်မြေနေရာ အသစ်ကို မျှော်လင့်ရင်း.. ဒီပုံလေးဖန်တီးဖြစ်တယ်။
ပုံကိုအမြန်ရေးဆွဲရင်းနဲ့ လက်ရာကဖြစ်ကလက်ဆန်းဆန်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအရာလေးပဲအဓိကခံစားရင်း ပုံရဲ့လက်ရာကိုတော့ ဖြည့်တွေးကြည့်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ plastic bags pollution အနေအထားတွေထက် နောက်နောင် pollution လျော့နည်းစေရန် သူငယ်ချင်းများနဲ့ လူထုကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
(((( ကြွတ်ကြွတ်အိတ်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့သုံးကြပါစို့))))
မြန်မာပြည်ကြီးကို စည်းကမ်းရှိပြီး သာယာလှပစေချင်တယ်။
(((လက်ဖက်ရည်ကို ပါဆယ်ဝယ်မသောက်တော့ပါဘူး))) ထိုင်သောက်ပါ့မယ်။
(((အပြင်ကဟင်းတွေကို ကြွတ်ကြွတ်အိတ်နဲ့ ပါဆယ်ဝယ်မစားတော့ပါဘူး))) ချိုင့်ဆွဲပါ့မယ်။
(((“စတားကိုလာ”လည်း ကြွတ်ကြွတ်အိတ်နဲ့ ၀ယ်မသောက်တော့ပါဘူး))) ပုလင်းမော့ပါ့မယ်။ :D
I am still enjoying my stay in Myanmar. Recently, together with my family, I went to Yuzana Garden City in the suburbs of Yangon which seemed quite well populated and well settled. It wasajoyful visit until we returned...Oh! we were surrounded by horrendous piles and piles of plastic bags. It was like we were in the middle ofaplastic ocean. There are even makeshift huts on those plastic card dumps. I can almost feel and sense the air that travelled through those discarded plastic bags...cough, cough, cough! That scene reminded me of long journeys I have taken not long ago. On both sides of the railway tracks from Yangon to Mandalay there were piles of plastic bags whenever we approach towns and cities. This rather unpleasant scene only ends when the train moves away from those towns and cities. It’s as if they wereasign that we were approaching human settlement.
It is really upsetting that plastic bags cannot decay or dematerialise easily. I HATE PLASTIC BAGS. Burn them and we get air pollution. Dump them in water and we get water pollution. Bury them in ground and we are creating toxic land. Perhaps we should put them inarocket and shoot it into the space, making it explodeabit far from earth. May be aliens might complain of space population??? Too expensive anyway!
While thinking of silly ways to address the problem, I created the above artwork. It was done inashort space of time as I was over enthusiastic to convey my message, so please be understanding of that and enjoy the main theme of it.
အပြင်သွားရင်လည်း ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အိတ် ဆောင်လေ့ရှိတယ်။။
အိတ်ဆောင် တူကိုလည်း ဆောင်သွားလေ့ရှိတယ်။။
(ဝါးပင်တွေ တုံးမှာ စိုး...
တခါသုံးတူတွေမှာ မလိုလာအပ်တဲ့ ဆေးပစ္စည်း
PAUK on5January 2010 at 08:09
Yes, this is true! Anyway you areasmart girl... I love your all artworks and concepts are great!!
Mg Ngal on5January 2010 at 15:42
ယူသွားတဲ့ အိပ်ထဲဘဲ ထည့်လိုက်တယ် သိမ်ရမှာ ပျင်းသလို လွတ်ပြစ်ရင်လည်း အမှိုက်ခွဲရတာ ပျင်းလို့..။
အဲတော့ ပလပ်စတစ်ကို မယူတော့ပါ ။
ဒါလည်း ကမ္ဘာကြီးကို စောင့်ရှောင်နည်းသေးသေးလေးဘဲပေါ့နော်..။
မြတ်မွန် on5January 2010 at 23:27